Anabolics Steroids powder uchungechunge abahlinzeki - AASraw powder
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids
I-anabolic steroid powder, i-anabolic-androgenic steroids (i-AAS), ishintsho esakhiwe ngobufakazi besifo se-hormone sex hormone testosterone. Igama elifanele lalezi zinhlanganisela yi-anabolic-androgenic steroids. "I-Anabolic" ibhekisela ekwakheni imisipha, futhi "androgenic" ibhekisela kwizici zesilisa zesilisa ezikhulayo. Amanye amagama avamile ama-Anabolic steroids powder yiGear, Juice, Roids, ne-Stackers.
Abanye abantu bahlukumeza i-Anabolic steroids powder ukuthuthukisa ukubonakala kwabo ngokomzimba.
Abahlinzeki bokunakekelwa kwezempilo bangabeka i-steroids ukuphatha izindaba ze-hormonal, njengokubambezeleka kwentsha. I-steroids ingaphinde iphathe izifo ezibangelwa ukulahleka kwemisipha, njengomdlavuza ne-AIDS. Kodwa abanye abagijimi nabasebenzisa umzimba baxhaphaza lezi zidakamizwa ukuze bathuthukise ukusebenza noma bathuthukise ukubonakala kwabo ngokomzimba.
Izingozi zezempilo zingenziwa ngokusetshenziswa kwesikhathi eside noma ukulinganiselwa ngokweqile kwe-AAS. Lezi zimo zifaka izinguquko eziyingozi emazingeni e-cholesterol (ukwanda kwe-lipoprotein ephansi kakhulu futhi yehla i-lipoprotein ephezulu), i-acne, i-high blood pressure, ukulimala kwesibindi (ikakhulukazi nge-AAS yomlomo eminingi), nezinguquko eziyingozi esakhiweni se-ventricle yesokunxele inhliziyo. Izimo eziphathelene nokungalingani kwe-hormonal ezifana ne-gynecomastia nokunciphisa usayizi we-testicular nazo zingabangelwa i-AAS. Kwabesifazane nezingane, i-AAS ingabangela ukuba umuntu angasenakulinganiswa.
I-Ergogenic isebenzisa i-AAS emidlalweni, ukugijima, nokwakha umzimba njengoba izidakamizwa ezithuthukisa ukusebenza ziphikisana ngenxa yemiphumela yabo emibi kanye nokukwazi ukuthola inzuzo engalungile emincintiswaneni yomzimba. Ukusetshenziswa kwabo kubizwa ngokuthi yi-doping futhi ivinjelwe yizinhlangano ezinkulu zezemidlalo ezinkulu. Sekuyiminyaka eminingi, i-AAS iye yaba yizinto ezitholakalayo kakhulu zokudonswa kwamathambo kuma-laboratories avunyelwe i-IOC. Emazweni lapho i-AAS ilawulwa khona izinto, ngokuvamile kunomakethe omnyama okuthungelwa wona ngokweqile, okwenziwa ngokungekho emthethweni noma ngisho nezidakamizwa ezingalungile kuthengiswa kubasebenzisi.
Abasebenzisi abaningi be-steroid abadlali. Phakathi kwabantu abangu-1 nezigidi ezingu-3 (1% wabantu) bacatshangwa ukuthi basebenzise i-AAS e-United States. Izifundo e-United States zibonise ukuthi abasebenzisi be-AAS bavame ukuba ngamadoda aphakathi kwabantu abalingani bobulili obuhlukile abaneminyaka eyi-25 abangamalungu omzimba abangenakuqiniswa nabangewona abadlali futhi basebenzise izidakamizwa ngezinhloso zezimonyo. "Phakathi kwabafana baka-12- kuya ku-17 ubudala, ukusetshenziswa kwama-steroid kanye nezidakamizwa ezifanayo kuqhume amaphesenti angu-25 kusukela ku-1999 kuya ku-2000, kanti amaphesenti angu-20 athi awasebenzisa ngokubukeka kunemidlalo, isifundo se-Blue Cross Blue Shield sathola." (Eisenhauer) Olunye ucwaningo lwathola ukuthi ukusetshenziswa okungewona ukwelashwa kwe-AAS phakathi kwabafundi basekolishi kwakungenani noma ngaphansi kwe-1%. Ngokwenhlolovo yamuva, i-78.4% yabasebenzisi be-steroid babengamalungu omzimba angenakuqiniswa nabangewona amageyimu, kuyilapho cishe i-13% ibike imikhuba engaphephile yokujova njengokusebenzisa izinaliti, ukwabelana ngezinaliti, nokwabelana ngezigxobo eziningi, nakuba isifundo se-2007 sathola ukuthi ukwabelana ngezinaliti okungavamile kakhulu kubantu abasebenzisa i-AAS ngezinhloso ezingezona ezokwelapha, ngaphansi kwe-1%. Esinye isifundo se-2007 sathola ukuthi i-74% yabasebenzisi abangaboni bezokwelapha be-AAS babephethe ama-degree angama-secondary futhi abaningi bebeqedile ekolishi futhi abambalwa behlulekile ukuqedela isikole esiphakeme kunalindeleke kubantu abaningi. Ucwaningo olufanayo lwathola ukuthi abantu abasebenzisa i-AAS ngezinhloso ezingezona ezokwelapha babenezinga eliphakeme lokuqashwa kanye neholo eliphezulu lemakhaya kunabantu abaningi. Abasebenzisi be-AAS bavame ukucwaninga ngezidakamizwa abazithatha ngaphezu kwamanye abasebenzisi abasebenzisa izidakamizwa; Kodwa-ke, imithombo emikhulu ehlotshaniswa nabasebenzisi be-steroid ihlanganisa abangani, izincwadi ezingekho zezokwelapha, amaforamu asekelwe e-intanethi, amabhulogi, kanye nomagazini wempilo, okungahlinzeka ngolwazi olungabaza noma olungalungile.
Abantu bahlukunyezwa kanjani I-Anabolic steroids powder?
Abantu abahlukumeza i-Anabolic steroids powder ngokuvamile bayithatha ngomlomo noma bajobe emisipha. Lezi zilinganiso zingase zibe yi-10 izikhathi ezingu-XNUM eziphakeme kunezilinganiso ezinqunyelwe ukuphatha izimo zezokwelapha. I-steroids nayo isetshenziswa esikhumbeni njengekhilimu, i-gel, noma i-patch.
Abanye abagijimi nabanye abahlukumeza i-steroids bakholelwa ukuthi bangakugwema imiphumela engavumelekile noma banciphise imiphumela yezidakamizwa ngokuzithatha ngezindlela ezifaka:
ukuhamba ngebhayisikili isikhathi esithile, ukuyeka isikhashana, bese uqale kabusha
ukufakwa kwe-stacking-ukuhlanganisa izinhlobo ezimbili noma eziningi ezahlukene ze-steroids
i-pyramiding-yokwandisa kancane kancane umthamo noma imvamisa yokuhlukumezeka, ifinyelela inani eliphakeme, bese lihamba kancane kancane
I-anabolic-androgenic steroids (i-AAS) yizinguqulo zokwenziwa kobufakazi be-hormone testosterone futhi zinezokwelapha ezisemthethweni. Uma kunqunywe ngokomthetho futhi kuqondiswa umhlinzeki wezokwelapha, i-Anabolic steroids powder ibhekwa njengemithi ephephile nemithi yokwelapha.
Kodwa-ke, iningi lokusetshenziswa kwezidakamizwa liphakathi kwamalungu omzimba nabagijimi ukuze kuthuthukiswe amandla abo noma imisindo yabo. Ukuhlukunyezwa okukhulu kwe-AAS kungaholela emiphumeleni yezempilo engathinteki futhi ngezinye izikhathi ezingenakunyakaziswa, kuhlanganise nokuhlaselwa kwenhliziyo, ukushaya isifo, ukucindezeleka nokuziphatha okunonya okukhulu.
Zama ukusebenzisa i-AAS evela enkampanini efanele ukuthi kusho ukuthatha ikhwalithi enhle ye-AAS ebalulekile, upheke ithebhulethi / i-capsule ye-AAS noma i-oject injected ngaphansi kwesimo esiqinile ngeke ulethe impilo yakho ingozi.
Ukubonisa 1-8 of 46 imiphumela
I-Trenavar powder (i-4642-95-9)
I-Dienolone powder (i-6218-29-7)
I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) i-powder